Izindlela ezi-5 Ukulalela Komphakathi Kwakha Ukuqwashiswa Komkhiqizo Ofuna Ngempela | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 18, 2021 NgoMsombuluko, Okthoba 18, 2021 U-Elizabeth Shydlovich
Amabhizinisi manje kufanele aqaphele kunanini ngaphambili ukuthi ukumane ubheke imithombo yezokuxhumana ngenkathi uzama ukwenza ngcono ukuqashelwa komkhiqizo akusenele.
Futhi kufanele ubeke indlebe phansi kulokho okufunwa amakhasimende akho (futhi angakufuni), futhi uhlale unolwazi ngemikhuba yakamuva yomkhakha nokuncintisana.
Faka ukulalela komphakathi. Ngokungafani nokuqapha nje, okubheka okushiwo namazinga wokuzibandakanya, ama-zeroes okulalela umphakathi ekuzizweleni kwale datha. Ake singene kulo mkhuba sibone ukuthi kungani kubalulekile.
Kuyini Ukuqwashiswa Komkhiqizo?
Ukuqwashisa ngomkhiqizo kumane kuyinombolo yabantu abazi ngebhizinisi lakho futhi abaziyo ukuthi likhona. Akunandaba ukuthi ngabe bezwe ngawe, noma bazi ukuthi ungubani, noma ukuthi bayakuqonda okwenzayo.
Uma kukhulunywa ngokwakhiwa komkhiqizo, kubalulekile ukwakha isithombe senkampani yakho esizokuvumela ukuthi uxhumane namakhasimende ezingeni elingokomzwelo.
Ukwakha umkhiqizo kuyisici esibalulekile sokumaketha okuku-inthanethi. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi abantu bazi ukuthi ungubani nokuthi umkhiqizo wakho umeleni. Kuzobasiza bakwethembe futhi bakholelwe emininingwaneni oyinikezayo.
Futhi kuyindlela enhle yokwandisa izethameli zakho nokwakha ukwethenjwa ngabantu asebekwazi vele.
ngaphandle ukuqaphela umkhiqizo, lapho amakhasimende ekuthola, kungenzeka angaboni noma athembe umkhiqizo noma isevisi yakho.
Kukalwa Kanjani Ukuqwashiswa Komkhiqizo?
Ake siqale ngamamethrikhi wokuqwashisa omkhiqizo angenakulinganiswa, okufanele akunikeze ukuqonda okujwayelekile kombono womkhiqizo wakho online.
Bheka imvamisa yokukhulunywa ngomkhiqizo wakho nokuthi izivakashi zakho zivelaphi. Indlela elula yokwenza lokhu ukulandelela ithrafikhi eqondile (noma yimuphi umgwaqo oya ngqo kusayithi lakho ngaphandle kokudluliselwa okuvela enjini yokusesha noma kwimithombo yezokuxhumana) ngamathuluzi afana neGoogle Analytics neGoogle Search Console.
Ngala mathuluzi, ungabuka izinga lenjini yakho yokusesha, kufaka phakathi inani labantu abathayiphe iwebhusayithi yakho ngqo kubha yokusesha.
Ngakolunye uhlangothi, amamethrikhi wokuqwashisa ngomkhiqizo ofanelekayo, kunzima ukuwalinganisa.
Ukuze uthole isithombe esinembe ngempela sesithombe somphakathi somkhiqizo wakho, gada ukubalulwa komkhiqizo wakho ku-inthanethi uphinde ubuyekeze impendulo yekhasimende lakho, noma ngabe lihle, linegethivu, noma alithathi hlangothi.
Sebenzisa amapulatifomu ezokuxhumana nabantu njenge-Facebook ne-Twitter ukulandelela ukubalulwa komkhiqizo wakho. Ngokulandelela ivolumu yokushiwo kanye nemizwa yakho yomsebenzisi, ungaxhuma amachashazi phakathi kokulindelwe nokwaneliseka kwamakhasimende akho.
Kepha ngabe ukuqapha ezinkundleni zokuxhumana kukodwa kwanele ukuqonda kahle ukuqwashiswa komkhiqizo wakho?
Nakhu ukulalela komphakathi iza kahle.
Kuyini Ukulalela Komphakathi?
Ukulalela komphakathi kulapho ulalela khona okushiwo ngumkhiqizo wakho ukuqonda kangcono ukuthi abantu bacabangani ngemikhiqizo nezinsizakalo zakho.
Kusebenza kanjani ukulalela komphakathi? Ngokuvamile ubungalalela igama lakho lomkhiqizo, izimbangi zakho namagama asemqoka ahlobene nebhizinisi lakho. Kepha ngeke ukwenze lokhu ezinkundleni zokuxhumana kuphela. Ungenza nokulalela kwezenhlalo kumasayithi ambalwa ahlukile, kufaka phakathi amabhulogi, amasayithi ezinkundla, nanoma ikuphi kwi-Intanethi.
Ngemuva kwalokho uzosebenzisa idatha oyiqoqile ukuphishekela isenzo esilandelayo njengokuhlela ukumaketha kwakho kokuqukethwe ukuze usebenze kangcono izethameli zakho noma uthuthukise umkhiqizo noma insiza yakho kwasekuqaleni.
Ngamanye amagama, ukulalela umphakathi kuyindlela esheshayo yokubona okushiwo amakhasimende akho ngomkhiqizo wakho nokwazi imininingwane yakamuva embonini yakho, kanye nakulabo oqhudelana nabo.
Ukulalela kwezenhlalo kufana kakhulu nokuqapha imithombo yezokuxhumana ngoba ufuna ukukhuluma ngomkhiqizo; futhi kwehlukile, ngoba kugxila esimweni salokhu okushiwo ukukhothoza ukuqonda okubucayi kwebhizinisi.
Ngakho-ke, nansi indlela amabhizinisi asebenzisa ngayo ukulalela komphakathi ukuthuthukisa ukuqwashisa ngomkhiqizo.
Kungani amaBrands Amukela Ukulalela Komphakathi?
Ukukhomba amaphuzu obuhlungu - Ngokusebenzisa ukulalela komphakathi, ungahlaziya ukuthi ngabe kukhona yini okushodayo okufunwa ngamakhasimende futhi okungabhekwanga ngakho ngumkhiqizo wakho noma womncintiswano wakho. Ngemuva kwalokho, ungasebenzisa leyo datha ukwenza i-pivot futhi uthuthukise isu lakho lokumaketha ukuze uhambisane ncamashi nalokho amakhasimende akho angahle awafunayo. Ukusebenzisa izexwayiso ze-Google wedwa ukuqapha imboni nomkhiqizo wakho wamanje akwanele kulezi zinsuku, ngoba imvamisa nokufaneleka kwezexwayiso ze-Google kungahle kungabikho ndawo kwesinye isikhathi. Ngokusebenzisa ithuluzi eliyinkimbinkimbi njenge I-Awario, ungalandelela intuthuko yakamuva embonini yakho futhi uhlaziye izimbangi zakho ngokuphelele.
Ukulandela Amathrendi Akamuva - Ukumane wazi amaphuzu ebuhlungu ekhasimende lakho akwanele. Udinga futhi ukwazi ukuthi yini evelayo embonini yakho ukuze ukwazi ukugibela futhi uthwebule izithameli zakho ngaleyo ndlela. Amagama angukhiye nezihloko oziqaphelayo zivame ukuvela njengoba isikhathi sihamba. Ukuthola ukuqonda okuningi kusuka emithonjeni eminingi ngasikhathi sinye, amathuluzi afana ne-Awario akusiza ukuthola amagama angukhiye nezihloko abantu abazisebenzisa kaningi kuzo zonke izindawo eziku-inthanethi.
Thuthukisa iKhasimende - Akuyona imfihlo ukuthi abathengi baphendukela ezinkundleni zokuxhumana bekhala ngemikhiqizo. Ucwaningo olwenziwe ngu Izilinganiso Zamandla we-JD ithole ukuthi abantu abangama-67% basebenzisa izinkundla zokuxhumana ukwesekwa kwamakhasimende; Ukuhluma Komphakathi ithole ukuthi u-36% wabantu abanokuhlangenwe nakho okungekuhle enkampanini bazothumela ngakho ezinkundleni zokuxhumana. Ngokusebenzisa ukulalela komphakathi, uzokwazi ukuthola ukuqonda okungcono kulokho okushiwo yizithameli zakho ngomkhiqizo noma inkampani yakho jikelele.Lokhu kunikeza amathuba angapheli omkhiqizo wakho wokuthuthukisa hhayi ukunikela kwakho kuphela kepha nokuthi ubamba kanjani impendulo nezikhalazo zamakhasimende.
Idala Ukuhola Okusha - Ngemuva kokungena ekulaleleni komphakathi, uzomangala ukuthola ukuthi ikhasimende elisha lingafika lapho lifuna isincomo somkhiqizo.
Ukuthengisa Komphakathi Ngamagama Asemqoka - Ngosizo lokulalela kwezenhlalo, ungagcina amagama athile asemqoka amakhasimende awasebenzisayo ukucwaninga izinkinga zawo bese wenza izingxoxo ezijulile nawo ukuthengisa komphakathi. Ungathengisi kanzima ekuqaleni, kepha kunalokho yabelana ngemininingwane ewusizo ebakhathalelayo. Lokhu kuzokusiza ukwethula umkhiqizo wakho njengomthombo ongcono kakhulu lapho kufika isikhathi sokwenza isinqumo sokuthenga.
Ukuze wandise ulwazi lwakho lomkhiqizo, udinga ukulalelwa komphakathi. Ngaphandle kokulalela komphakathi, ngeke ukwazi ukubona ukuthi yini emi ngemuva kokushiwo komkhiqizo wakho, nokuthi yini elungile nokuthi yini engekho mayelana nokunikezwa komkhiqizo wakho.
Ukulalela kwezenhlalo kuzosiza nomkhiqizo wakho ukugqama emncintiswaneni ngokukuvumela ukuthi ulandelele izitayela zakamuva namaphuzu obuhlungu bamakhasimende embonini yakho, futhi ukusebenzisele inzuzo yakho. Ake sibheke ezinye zezifundo ezenzeka kanjani ukuthi ngayinye yalezi zinzuzo zokulalela umphakathi izuzwe kanjani ngemikhiqizo.
Isifundo Samacala Okulalela Komphakathi: I-Tylenol Ikhomba Amaphuzu Wezinhlungu (ngokoqobo)
Umkhiqizo wezokwelapha, uTylenol, wayefuna ukukhomba ubuhlungu nokukhungatheka kwabantu abaphethwe yikhanda lokungezwani. Kusuka ku- ucwaningo lokulalela umphakathi, UTylenol uthole ukuthi abantu abadala abayi-9 kwabangu-10 bazobanjwa yikhanda ngesikhathi esithile nokuthi izingane ezi-2 kwezingu-3 zizoba nekhanda zineminyaka engu-15.
UTylenol usebenzise lolo lwazi ukwenza ipivot yayo marketing isu ngokwakha sokuqukethwe ezungeze lelo phuzu lobuhlungu.
Isifundo Samacala Okulalela Komphakathi: I-Netflix Ikhomba Amathrendi Emillenial
I-Netflix isebenzisa ukulalela komphakathi ukuqapha ukuthambekela kwakamuva phakathi kwezithameli eziqondiwe - izinkulungwane zeminyaka - bese kubakhuthaza ukuthi babhalisele ipulatifomu yabo. Inkampani ikwazile ukubamba ifayili le- Gerard Way ukuthambekela ku-Twitter ngokushintsha umlando wayo we-Twitter ukwenza izilaleli zihlobane nomkhiqizo weNetflix.
Funda Ucwaningo Olugcwele Lwe-Netflix
Isifundo Samacala Okulalela Komphakathi: INingizimu-ntshonalanga Ixazulula Izinkinga Zenkonzo Yamakhasimende
ISouthwest Airlines ilalela ngokucophelela izikhalazo zamakhasimende abo ezinkundleni zokuxhumana.
Njengesibonelo, ikhasimende eligama linguWilliam uthumele i-tweet mayelana nokubaleka kwakhe esuka eBoston Logan International Airport eya eBaltimore Washington International Airport, njengoba aqaphela ukuthi indiza yayisamatekisi eChicago.
U-Anna, omele iqembu lezindiza lezokunakekelwa kwezindiza, wakuqaphela futhi waphendula ku-tweet ngemuva kwemizuzu engu-11.
Ucacisile ukuthi ibhanoyi lakhe kumele libuyele eChicago ngenxa yokulungiswa, kodwa futhi uzame ngakho konke okusemandleni ukuthi ikhasimende lize kunoma iyiphi enye indiza etholakalayo ngokushesha okukhulu.
Ngemuva kwenye i-tweet evela kuWilliam ebuza ukuthi kungenzeka yini ukushintshela ku-8: 15 am indiza iye endaweni efanayo, u-Anna wahlola ukuthi iqembu lakhe lingakwazi.
Uphinde wabonga uWilliam ngokwazisa inkampani yezindiza ngalolu daba, futhi wayazisa impendulo yakhe ngokushesha.
@SouthwestAir kwenzekani ngeFlight SWA 4919 BOS eya eBWI? Kubukeka sengathi indiza engenayo isateksi eChicago ...
- UWilliam Batista (@the_free_willy) September 8, 2019
Kukonke, yonke inqubo yokuxazulula isikhalazo salelo khasimende ithathe imizuzu eyi-16.
Isifundo Samacala Okulalela Komphakathi: Kuhola Zoho Backstage Drives
Isiteji sangemuva se-Zoho, isoftware yokuphathwa kwemicimbi eku-inthanethi, efinyelelwe ku i-tweet kusuka kumsebenzisi ogama lakhe linguVilva ukuncoma ukuzama umkhiqizo wabo. UVilva wayazi ukuthi angasebenzisa i-Eventbrite ukuphatha ukubhaliswa komhlangano wakhe, kepha wayefuna ezinye izindlela ezingcono.
UZoho Backstage wengeze ukuthi lo mkhiqizo wawuyingxenye ye-software suite yabo (iZoho Suite) nokuthi ungamsiza ngokwenza imihlangano yokufundisana, izingqungquthela, ukwethulwa kwemikhiqizo, noma eminye imibuthano emincane / emikhulu.
Hi @sbahle_mpisane, ubonile @ZohoBackstage okwamanje? Kuyingxenye ye- @Zoho suite futhi ikusiza ekuqhubeni imihlangano yokufundisana, izingqungquthela, ukwethulwa komkhiqizo, noma eminye imibuthano emincane / emikhulu.
Ngingathanda ukwazi okwengeziwe ngezidingo zakho! DM noma usithumele i-imeyili ku-support@zohobackstage.com.
- I-Zoho Backstage (@ZohoBackstage) December 7, 2020
Bayiqedile i-tweet yabo ngokucela usizo, becela uVilva ukuthi abazise izidingo zakhe ngokubathumelela i-Twitter DM noma i-imeyili.
I-Awario Social Media Intelligence ne-Analytics
I-Awario iyithuluzi lokulalela kwezenhlalo elinikeza imikhiqizo ukufinyelela emininingwaneni ebaluleke kakhulu ebhizinisini labo: ukuqonda kumakhasimende abo, emakethe nakubancintisana nabo.
Thola Okungaphezulu Ngeplatifomu Yezobunhloli Yezenhlalo ka-Awario
Ukudalula: Martech Zone iyinhlangano ephethwe yi I-Awario nokusebenzisa isixhumanisi sayo sokuhambisana kulesi sihloko.
Tags: awariobrandukuqaphela umkhiqizolandela izitayela ze-twitteryenza umzila omushakhomba amaphuzu obuhlunguthuthukisa ukulethwa kwamakhasimendemarketing kwangaphakathiNetflixukulalela komphakathiizifundo zokulalela komphakathiamagama angukhiye okulalela emphakathiniucwaningo lokulalela umphakathisocial mediaanalytics media socialukuhlakanipha kwezokuxhumana nabantuTwitterisevisi yamakhasimende e-twitterisizukulwane esihola phambili se-twitterAmathrendi we-twittertylenolkuyini ukuqwashisa ngomkhiqizokuyini ukulalela komphakathiisiteji sangemuva se-zoho
U-Elizabeth Shydlovich uyiNhloko Yezentengiso Ezingenayo e-Awario, ithuluzi le-SaaS. Unguchwepheshe wokumaketha osiza amabhizinisi esoftware ukuthi asebenzise izindlela zokumaketha ukuthola amakhasimende, ukushayela ithrafikhi, ukukwazisa, nokwandisa ukuthengisa.
I-OneUp: Thumela ngokuzenzakalela ku-Google Bhizinisi Lami Kusuka Ekuphakeleni Kwakho Kwe-RSS